Xiddig ka tirsan kooxda Liverpool oo raali-galin bixiyay, kaddib markii uu ihaaneystay Harry Kane – Gool FM
Xiddig ka tirsan kooxda Liverpool oo raali-galin bixiyay, kaddib markii uu ihaaneystay Harry Kane
(England) 01 Agoosto 2019. Laacibka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Harvey Elliott ayaa bixiyay raali galin, kaddib markii uu ka soo muuqday “fiidiyoow” kaasoo lagu sheegay inuu ku ihaaneystay weeraryahanka Tottenham Hotspur ee Harry Kane, waxayna arrintan muran xoogan ka dhalisay baraha xiriirka bulshada, isagoo intaas kaddib weerar xoogan kala kulmay taageerayaasha.
Harvey Elliott ayaa qoraal uu ku soo qoray boggiisa rasmiga ah ee “Instagram-ka” wuxuu ku sheegay:
“Waxaan rabaa inaan ka bixiyo raaligalin qalbiga ah wixii ihaano ah, taasoo sababtay fiidiyowgeyga ee la faafiyay”.
“Fiidiyowga wuxuu ahaa mid gaar ah ee laga duubay aniga iyo asxaabtayda, Ujeedadiisu ma ahayn inaan qofna ku dhibaateeyo, waxaan doonayaa inaan xaqiijiyo inaan wax ula jeedo ah ka laheyn”.
Yeelkadeeda, Harvey Elliott ayaa yimid kooxda Liverpool inta lagu gudi jiro suuqan xagaaga, wuxuuna ka qeyb galay kulankii saaxiibtinimo ay la ciyaareen kooxda Napoli, kaasoo ay Reds la kulantay guuldaro 3-0 ah.
Muxuu ka yiri Unai Emery mustaqbalka Koscielny & qorshahooda inta maalmood ee ka harsan suuqa?
Lukaku oo si maldahan kaga hadlay arrimo ku saabsan mustaqbalkiisa